Awoodda Korantada, Adaporka Awoodda, Awoodda Awoodda - Huyssen
Lagu hagaajin karo 0-20V 30A 600W Beddelidda korontada
Lagu hagaajin karo 0-200V 3A 600W Beddelidda korontada
AC/DC 0-24V 20A 480W awoodda beddelka la hagaajin karo ...
Lagu hagaajin karo 0-220V 2A 440W Bedelka korontada
La hagaajin karo 0-12V 33A 400W CV CC Awoodda Beddelka ...
0/1-10v darawalka la dareemi karo 32 ~ 40V 120W Biyo-la'aan ...
Hayayaashii Mount 0-60V 200A 12KW Programm hagaajin ...
Soo Saarkii Saddexaad 200W 5V12V24V Qalabka Awoodda Qalabka
0-200V2.5A 500W beddelka beddelka hagaajin karo ...
Dual Output 180W 24V36V Powe Control Industrial ...
Cabbirka is haysta 80W 5V30V Dual Beddelashada Po ...
Barnaamijka 0-400V 20A 8000W budada DC oo la hagaajin karo ...
2 warshadood 6 xafiis
30+ shahaado caalami ah
Dhammaan alaabtayada waxaa loo farsameeyay si ay ula kulmaan heerarka amniga adduunka.
Xoogga saar R&D iyo wax -soo -saarka warshadaha korontada muddo 15 sano ah.
Waxaa la aasaasay 2011, Huyssen power waxaa ka go'an inay noqoto bixiyaha ugu wanaagsan ee xallinta awoodda. Khadadkayaga wax-soo-saarka waxaa ka mid ah sahayda korontada ee AC-DC, Awoodda DC-ga ee awoodda sare leh, Adapter-ka korantada, xeedho degdeg ah, wadar ahaan 1000+ nooc.
Dhammaan alaabtayada waxaa loo farsameeyay si ay ula kulmaan heerarka amniga adduunka. Xakamaynta tayada iyo habsocodka ayaa caymis ah iyadoo la adeegsanayo noocyo kala duwan oo tusaalooyin tirakoob iyo farsamooyin falanqayn ah inta lagu jiro wareegga wax -soo -saarka. Intaa waxaa dheer, dhammaan badeecaduhu waa inay ka gudbaan gubasho adag oo si buuxda otomaatig ah imtixaanka kama dambaysta ah ka hor intaan la soo dirin.Waxaan leenahay laba saldhig oo wax soo saar, mid Shenzhen iyo kan kale ee Dongguan, oo leh gaarsiin waqtigeedii ah.
Qalabka Warshadaha ee Caqliga badan
1. Waxaan leenahay khadadka wax soo saarka korontada oo dhammaystiran, laga bilaabo 5 watts oo adabtarada korontada ah ilaa 100,000 watts oo ah korontada barnaamijka.
2. Qeexitaanno dhammaystiran, koox R&D oo xoog leh, taageerta habaynta gaarka ah. Waxaan ku siinaynaa xalal koronto oo macquul ah.
3. Jawaabta degdegga ah ee macaamiisha, caddeynta waqtiga, gaarsiinta degdegga ah.
Dhismaha Kooxda Dibedda ee Huyssen –Hawlaha Rafting
Si loo hagaajiyo cadaadiska shaqada, loo abuuro xamaasad, mas'uuliyad, iyo jawi shaqo oo faraxsan, kobciya nolosha dhaqanka hiwaayadda shaqaalaha, hagaajinta daryeelka shirkadda, iyo kordhinta isgaarsiinta ...
Huyssen Power sahayda tamarta aadka u khafiifka ah
Awoodda Huyssen Power ee sahayda korontada ee aadka u khafiifka ah ayaa soo saartay taxane cusub oo ah 800W. Nalalka korontada ee aadka u khafiifka ah ee LED-ka, sababta oo ah magaca ayaa tilmaamaya, waa mid aad u khafiif ah oo khafiif ah, oo laga yaabo inuu la qabsado ...
Huyssen ee korontada biyuhu ka helaan PFC sare
Huyssen's PFC sahayda korontada ee aan biyuhu lahayn waxaa ku jira awood laga bilaabo 150 Watt ilaa 600W. Awoodda soo -saarku waxay noqon kartaa 5V, 12V, 24V, 30V, 36V, 48V, iwm. Waxaa lagu baakadeeyay si adag, biyo-mareen ah, boodh-caddeyn, kabka al ...
Sahayda Awoodda Danab ee Sare ee Suuqa Beerta Korontada
Sahayda Awoodda Korontada Sare ee warbixinta cilmi -baarista Suuqa elektaroonigga ah waxay daraasaysaa heerka suuqa, muuqaalka tartanka, cabbirka suuqa, saamiga, heerka kobaca, isbeddellada mustaqbalka, wadayaasha suuqa, fursadaha, ...
beddelidda korontada hab hab, Awoodda Awoodda La -habeeyay, Awooda Korantada Dc, Led Strip Light transformer, Led Strip Light Power Supply, Awoodda Awoodda Isbeddesha,